Ithegi: Imeyile | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 12, 2016 NgoLwesithathu, Oktobha 12, 2016 Douglas Karr
Njengoko ndibhala oku, ngoku ndise-mail isihogo. Ndinee-imeyile eziyi-1,021 ezingafundwanga kwaye ukungaphenduli kwam kugqitha kwimiyalezo ethe ngqo ngeendaba zosasazo, iminxeba kunye nemiyalezo ebhaliweyo. Ndithumela malunga nee-imeyile ezili-100 kwaye ndifumana malunga ne-imeyile ezingama-200 yonke imihla. Kwaye oko akubandakanyi ukubhaliswa kweleta zeendaba endizithandayo. I-inbox yam ayikho kulawulo kwaye i-inbox zero iyinyani kum njengedayinaso epinki. Ndithumele itoni
Iscout: Inkonzo yokuThumela iiKhadi leposi nge- $ 1 Nganye
NgoLwesibini, Februwari 16, 2016 Douglas Karr
Iscout yinkonzo elula eyenza into enye-ikuvumela ukuba uthumele i-4 × 6, amakhadi eposi anemibala epheleleyo eyenziwe nguwe. Unikezela ngemifanekiso yakho engaphambili neyangasemva, unike uluhlu lweedilesi (sinokukunceda uyakhe okanye ungayenza ngokwakho), kwaye baya kuprinta iposikhadi entle kwaye bayithumele kulo naliphi na inani labathengi bakho okanye abathengi bakho $ 1.00 nganye. Isebenza njani iScout yongeza imifanekiso- Sebenzisa eyabo